Lalao tenisy tena izy miaraka amin'ny World of Tennis: mierona 20 taona | Androidsis
World of Tennis: Roaring '20s, miaraka amin'io feon-kira io ao amin'ny 20s, mitondra antsika amin'ny lalao tenisy izay azontsika atao ny manome tsiny kely ary ahafahantsika mitehaka amin'ny fomba malefaka sy mahery mampiseho ny fanatanjahantena amin'ny baolina.
Lalao natsangana tamin'ny taona 20 izay tsy misy mahory na inona na inona mandehana any amin'ny faribolana matihanina ary mahazo anarana hajaina. Miaraka amin'ny fikasihana bebe kokoa amin'ny simulator, ny lalao dia somary tsotra ihany amin'ny alàlan'ny fampiasana fihetsika isan-karazany mba hikapohana sy ny bokotra fanalahidy hametrahana ny tenanao eo amin'ilay làlana. Andao hofantarina izao tontolo izao amin'ny tenisy: Roaring '20s akaiky.
1 Asehoy ny mialoha mialoha anao amin'ny World of Tennis: Roaring '20s
2 Mora milalao
3 Ataovy miavaka ny mpilalaoo sy hitety an'izao tontolo izao
Asehoy ny mialoha mialoha anao amin'ny World of Tennis: Roaring '20s
Tonga ity lalao tenisy ity amin'ny fotoana ananantsika ny Nadal lehibe manapaka ny tadiny amin'ny lalan'ny loto indrindra. Ka raha mpankafy ny rakotra sy ny baolina ianao, World of Tennis: Roaring '20s dia tonga tao amin'ny Google Play Store ho anao.
Lalao izay mitondra antsika lalao milamina izay tsy maintsy refesintsika ny tempos amin'ny kapoka hanitsiana ny hery sy ny làlan-kizorana, ary amin'izany dia hampiofanina mpanazatra iray izay hampiseho amintsika ireo tifitra samihafa izay mendrika ny handresy misokatra.
Ny mekanika dia tena tsotra: mamely amin'ny fihetsika ianao ary mametraka pulses amin'ny tenanao. Ny ambiny ny fihetsika tokony ho tanterahina dia hampiasa balaonina misy tsindry bokotra roa na famohana kapoka vaovao ho azontsika rehefa miakatra ambaratonga isika.
Ny tsara indrindra amin'ny rehetra amin'ny tontolon'ny tenisy: Roaring '20s dia mora ny milalao. Amin'ny voalohany dia tsy mila tapahina be ny lohantsika, satria ny tanjona dia ny hianatra ny fomba fampiasana ilay fihetsika mba ho tonga lafatra ny kapoka. EFA aorian'izay dia hanampy kapoka vaovao isika izay hahagaga ny mpanohitra ary hiarina amin'ny fandresena.
Ny iray amin'ireo hatsarany dia ny lalao marobe, na izany aza ireo dia "asynchronised". Izany hoe hilalao amin'ny hafa ianao, saingy tsy ho amin'ny fotoana tena izy fa hanohitra ny alok'izy ireo. Izany dia manaisotra singa iray lehibe amin'ny fifaninanana, fa farafaharatsiny manome ny fahatsapana milalao miaraka amina mpilalao an'arivony eraky ny planeta.
Ity misy singa iray hafa hanasongadinana, satria azontsika atao ny "manoratra" ny fomba filalaovantsika rehefa nahavita lalao iray isika. Ka raha hitanao fa nilalao tsara tamin'ny tifitra kalitao isan-karazany ianao dia avelao ny marikao amin'ny Artigence Intelligence hilalao ho anao amin'ireo mpilalao hafa.
Ataovy miavaka ny mpilalaoo sy hitety an'izao tontolo izao
Zava-dehibe iray hafa amin'ny World of Tennis: Roaring '20s dia izany hahita dian-tongotra sy fifaninanana marobe ianao hanehoana ny fahaizanao amin'ny tenisy. Avy amin'ny studio namorona ny World of Tennis: Roaring '20s dia mampanantena izy ireo fa hanampy fifaninanana manan-danja toa an'i Wimbledon na Roland Garrós mba ho tena misy ny zava-drehetra ary ankafizinao toy ny dwarf. Ankehitriny dia mbola ho hita eo raha izany no izy, na dia milaza ny marina aza, dia mampanantena zavatra betsaka ity lalao ity.
Ny lesoka fotsiny dia ny angovo milalao ny lalao, ka hiandry ianao raha tsy te-hamaky ilay boaty. Ho an'ny ambiny, ao amin'ny World of Tennis: Roaring '20s dia manana ihany koa isika be dia be ny namboarina ho akanjo ny mpilalao tenisy, mividiana raketa na mandoko azy mba hampifanaraka azy tsara.
World of Tennis: Roaring '20s dia lalao iray ara-teknika dia tratra tsaraNa dia amin'ny fotoana sasany aza dia azontsika atao ny manome tsiny fa ny mpilalao tenisintsika dia tsy mianjera amin'ny tany hahatratra io baolina ratsy io, na ny mpifanandrina aminy ihany no miampita ny harato raha tsy misy zava-mitranga amin'ny sary mihetsika fandresena Ho an'ny ambiny? Lalao tsara handaniam-potoana mandritra ny ora maro mandritra ny fivoarantsika ary mandresy ny mpifanandrina rehetra izay mametraka antsika ho amin'ny laharana voalohany manerantany isika.
World of Tennis: Roaring '20s dia iray amin'ireo lalao afaka manantona anao ary izany dia hitondra anao any amin'ny 20 miaraka amin'izany mozika manokana sy ny toerana milamina izany. Tsy dia mora loatra ny nanao tifitra tsara tamin'ny fihetsiky ny tananao teo amin'ny efijery. Manonona anao koa izahay ato amin'ity lisitry ny lalao tenisy tsara indrindra ho an'ny Android ity.
World of Tennis: Roarings 20s
Lalao tenisy tena izy
Ny fotoanan'ny lalao
Ny mpilalao dia mamakivaky ny harato amin'ny sary mihetsika sasany
Indraindray ny mpilalao dia tsy mandefa
Tsy voatsara amin'ny endrika 18: 9
Tenisy: Telopolo sambatra
Developer: Lalao Helium9
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » World of Tennis: Roaring '20s dia mitondra anao amin'ny lalao tenisy tsara indrindra ho an'ny Android
Hans dia hoy izy:
Kontrollerna är ologiska, jag har spelat detta i ett antal år.
Men det kommer helt ologiska missar och riktningar oavsett fotoana.
Valiny tamin'i Hans
Sivanina ny famaritana feno ny Xiaomi Mi A2 Lite